MARKA AAD MAGACA SAXIIXA AQOONSIGA INDOOR DIGITAL SIGNAGE
Qoraalka tifatiraha: Tani waa qeyb taxane ah oo lagu falanqeynayo isbeddelada hadda iyo mustaqbalka ee suuqa saxiixaha dijitaalka ah. Qaybta xigta waxay lafaguri doontaa isbedelada software.
Saxiixa dijitaalka ah ayaa si xawli ah ugu fidin lahaa gaaritaankiisa suuq kasta iyo aag kasta, gaar ahaan gudaha. Hadda, dukaammada waaweyn iyo kuwa yar-yarba waxay adeegsanayaan saxeex dijital ah lambarro balaaran si ay u xayeysiiyaan, kor ugu qaadida sumadaynta u horumariyaan khibradda macaamiisha, sida lagu sheegay Warbixinta Soo-saaraha Mustaqbalka Dhacdooyinka Dijitaalka ah. Waxay ogaatay in seddex meelood laba meelood ay tafaariiqleyaashu sahamin sameeyeen sheegeen in sumadeynta la hagaajiyey ay tahay faa iidada ugu weyn ee saxeexa dijitaalka, oo ay ku xigto adeegga macaamiisha oo fiicnaaday boqolkiiba 40.
Nordiska Kompaniet, oo dukaan ku leh magaalada Stockholm, Sweden, tusaale ahaan, waxay geysey saxeex dijital ah oo ay kuxiran yihiin xargaha maqaarka ah ee dusha sare ku dhegan oo derbiga ku dheji si ay u abuuraan khayaanada ay muujineyso in bandhiga uu ka laalaaday kooxda. Tani waxay ka caawisay bandhigyada inay la midoobaan tafaariiqda guud ee miyir-qabka iyo astaanta sumadda heerka sare.
Heerar guud, booska guriga ee saxeexa dijitaalka ah wuxuu ku arkaayaa bandhigyo wanaagsan oo lagu hagaajinayo sumadaynta, iyo aaladaha kaqeybgalka wanaagsan si loo hagaajiyo qibradda macaamiisha.
Bandhigyo ka fiican
Mid ka mid ah isbeddelada ugu waaweyn ayaa ah ka guurista bandhigyada LCD una gudubno muuqaallo aad u horumarsan oo LED ah, sida uu qabo Barry Pearmen, maamulaha gudaha iibka, Watchfire. Pearman wuxuu ku dooday in hoos u dhaca qiimaha ee soo bandhigida LED-ka uu gacan ka geysanayo sidii loo maareyn lahaa xaaladdan.
Nalalka LED-yada kaliya maahan kuwo badan, waxay sidoo kale noqdeen kuwa horumarsan.
Brian Huber, oo ah maareeyaha kooxda hal abuurka, Watchfire, ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay "Nadaamku inbadan inbadan ayuu ahaa, waxaan sii wadaynaa riixida xawaare adag. "Waa maalmahaa kaliya calaamadda weyn ee iftiinka nalka laydhku muujineyso 8 xaraf markiiba."
Isbeddello kale oo weyn ayaa ah riixidda loo soo bandhigo muuqaallada tooska ah ee loo yaqaan 'LED' si loo abuuro khibrado dheeri ah oo cabsi gelin leh, sida uu sheegayo Kevin Christopherson, oo ah agaasimaha suuq-geynta alaabada, NEC Display Solutions.
"Daawooyinka tooska ah ee loo yaqaan 'LED panels LED' waa kuwo si weyn loo beddeli karo waxayna abuuri karaan khibrado ku hareeraysan dhagaystayaasha ama abuuri kara qaab dhismeedka xallinta qodobbada diiradda la saarayo," Christopherson ayaa yiri markii la soo galay Warbixinta Soo-Saaraha Digniinta Digniinta Dijitaalka ah ee 2018 "Iyadoo leh xulashooyinka dusha sare ee Pixel wax kasta oo laga soo daawado dhow ilaa daawashada fog ee goobaha waaweyn, milkiilayaasha waxay isticmaali karaan dvLED si ay u bixiyaan khibrad gabi ahaanba aan caadi aheyn oo xusuus mudan. ”
Aaladda kaqaybgalka wanaagsan
Kaliya helitaanka muuqaal iftiin leh kuma filna in lagu bixiyo khibradaha wanaagsan ee gudaha. Taasi waa sababta iibgeyaasha saxiixayaasha dhijitaalka ah ay u soo bandhigayaan nidaamyo badan oo falanqeyn horumarsan si ay uga helaan aragtiyo muhiim ah macaamiisha, si ay si wanaagsan uga hawlgalaan.
Matthias Woggon, Madaxa Fulinta, indho-indheynta, ayaa ku tilmaamay soo galitaankiisa Warbixinta Digniinta Mustawaha Soo Saarka Dijitaalka ah in iibiyayaashu ay adeegsanayaan dareemayaal u dhow dhow ayna wajahayaan kaamirooyin aqoonsi si ay u aqoonsadaan macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan macaamiisha, sida inay eegayaan badeecad ama soo bandhigid.
“Algorithm-yada casriga ah xitaa waxay awoodaan inay gartaan cabbiraadaha sida da'da, galmada iyo niyadda iyagoo ka baaraandegaya muuqaalka wajiga muuqaalka sawirrada kaamerada. Intaa waxaa sii dheer, taabashada taabashada ayaa cabbiri kara taabashadda waxyaabaha gaarka ah waxayna qiimeyn karaan waxqabadka saxda ah ee ololayaasha xayeysiinta iyo soo celinta maalgashiga, "ayuu yidhi Woggan. "Isku darka aqoonsiga wajiga iyo tikniyoolajiyadda taabashada waxay u oggolaaneysaa cabbiraadda inta qof ee ka jawaaba waxa ay ka kooban tahay oo fududeynaya abuurista ololeyaal la bartilmaameedsanayo iyo kobcinta joogtada ah."
Saxiixa dhijitaalka ah wuxuu kaloo bixinayaa khibradaha is dhexgalka ee omnichannel si uu ula macaamilo macaamiisha. Ian Crosby, oo ah kuxigeenka madaxa iibka iyo suuqgeynta Zytronic, ayaa ku qoray soo galitaankiisa Warbixinta Digital Signage Future Trends Report ee ku saabsan Ebekek, hooyo iyo cunug dukaameeysata cunugga ee Turkiga. Ebekek ayaa adeegsanaysa saxeex dijital ah oo isdhaxgal ah si ay uxiriso iskuxirka eccmerce iyo iibka gacansiiyay. Macaamiilku waxay dhex mari karaan dhammaan alaabooyinka oo dhan oo ay wax u iibsan karaan si madaxbanaan ama weydiisan karaan kaaliyaha iibka caawimaad.
Sahaminta loogu talagalay Warbixinta Digital Signage Future Trends 2018 ayaa xaqiijisay isbeddelladaan khibradaha is-dhexgalka. 50 boqolkiiba tafaariiqda ayaa sheegay inay ogaadeen in shaashadda taabashada ay aad ugu wanaagsan tahay saxeexa dijitaalka.
Isbeddelka guud ee guud ee dhammaan tusaalooyinkaan oo dhan, ayaa ah riixaadda loogu talagalay warbaahinta ficil celinta badan, sida lagu sheegay warbixin-sannadeedka 'Digital Signage Future Trends Report Blog' oo uu soo diray Geoffrey Platt, oo ah agaasimaha RealMotion
Tiknoolajiyaddan is-dhexgalka ah ee soo ifbaxay dhammaantood waxay u baahan yihiin hal shey oo guud. Awoodda abuurka, falanqaynta iyo falcelinta adduunka u baahan xalka waqtiga-dhabta ah, ”ayuu yiri Platt.
Xagee u socdaa?
Booska gudaha, saxeexa dhijitaalka ah ayaa labadaba sii weynaanaya marka loo eego kuwa waaweyn, bandhigyada waaweyn ee leh barnaamijyada hal-abuurka leh iyo kuwa ka yar, iyada oo dukaamada Mama iyo Pop ay u soo bandhigaan bandhigyo ka fudud tiro ahaan waaweyn.
Christopherson wuxuu ku dooday in adeegsadayaasha dhamaadka saxiixayaasha dhijitaalka ah iyo iibiyaasha ay soosaarayaan xalal abuuraya dhagaystayaal ku howlan. Tallaabada xigta ee weyn ayaa ah goorta qeybaha oo dhami dhacaan, oo aan bilowno inaanu si dhab ah u dirno hawlgallo firfircoon oo daadad ku daadanaya suuqa shirkadaha waaweyn iyo kuwa yar-yarba.
"Tallaabada xigta ayaa ah in meesha la geliyo gorfaynta," ayuu yiri Christopherson. Mar alla markii wajigii ugu horreeyay ee mashruucyadan buuxa la dhammaystiro, waxaad filan kartaa in ficilkan u ololeeyo sidii dab ololaya oo kale iyadoo milkiilayaashu ay arkaan qiimaha dheeriga ah ee ay bixinayaan.
Sawirka loo maro Istock.com.